भावुक हुदै टिभी सिरियल निर्मात्री एकता कपुरले खोलिन् बिहे नगर्नुको यस्तो राज! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भावुक हुदै टिभी सिरियल निर्मात्री एकता कपुरले खोलिन् बिहे नगर्नुको यस्तो राज!
भावुक हुदै टिभी सिरियल निर्मात्री एकता कपुरले खोलिन् बिहे नगर्नुको यस्तो राज!
admin October 18, 2020 October 18, 2020 जीवनशैली, बलिउड, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । केही समय अघि आफ्ना अनुभव सुनाउने क्रममा बलिउडकी चर्चित टिभी सिरियल निर्मात्री एकता कपुरले खोलिन् बिहे नगर्नुको राज । जुन कुरा सुनाउँदा उनी आफै नै भएकी थिईन् भावुक । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि एकता कपुर बलिउडमै सबैभन्दा बोल्ड टिभी सिरियल निमार्ण गर्ने मध्यकी एक निमात्री हुन् । धेरै जसो उनीद्धारा निर्मित सिरियलमा महिला चरित्रलाई बलियो बनाउने गरिन्छ । अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
भारतमा महिलाको भन्दा पुरुषको बर्चस्व रहने भएको हुनाले उनले सिरियल मार्फत महिला सशक्तिकरणको कुरालाई निकै नै प्रथामिकता दिंदै आईरहेकी छन् । उनले सिरियल मार्फत समाजमा महिला पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य भएको देखाउने कोशिश गरिरहेकी छन् ।
बीरगञ्जबाट बरामद साढे २२ किलो अवैध सुन बारे आयो यस्तो खुलाशा!